Vaovao - Afaka feno rano mangotraka ve ny kaopy misy rano silikônina?
Betsaka ny manontany hoe, ny kaopy misy rano vita amin'ny gel silica ve afaka mitazona rano mangotraka?
Ny valiny dia azo antoka fa azo fenoina rano mangotraka.Ny tavoahangy rano silikônina dia vita amin'ny gel silica organika ara-tontolo iainana.Ny fanoherana ny mari-pana -40-220 degre, maharitra ary tsy miova mihitsy.Azo aforitra ao anaty paosy ampiasaina!
Ny tavoahangin-drano silikônina dia vita amin'ny silicone ranon-tsakafo + plastika PP ary tsy misy BPA (bisphenol A).Ny vokatra dia vita amin'ny silicone kilasy sakafo, izay azo antoka sy tsy misy poizina, ary ny fitaovana mitovy amin'ny zaza pacifier.
Ny fofona miavaka tavela ao amin'ny vatana kaopy dia satria mandritra ny dingan'ny famokarana, ny gel silica dia tavela rehefa avy nandrahoina tamin'ny hafanana ambony tao amin'ny lafaoro, ary ny vokatra dia aterina mivantana amin'ny mpanjifa avy amin'ny tsipika famokarana.
Tsara ny manadio azy amin'ny savony alohan'ny fampiasana azy, ary andrahoy ao anaty vilany mandritra ny 6-7 minitra mba hanesorana sy hanesorana fofona manokana.Azo aforitra amin'ny habeny izy io ary misy farango.
Silicone vokatra endri-javatra:
Ny akora dia vita amin'ny 100% silica gel sariaka: Food silica gel dia inorganic polymer colloidal akora noforonin'ny polycondensation ny silicic asidra, ary ny tena singa dia mSiO2nH2O.Manana fahamarinan-toerana simika tsara izy, afa-tsy ny alkali caustic sy ny asidra hydrofluoric, tsy mihetsika amin'ny asidra na alkali amin'ny fepetra roa manokana.Matetika izy io no ampiasaina amin'ny vokatra misy fepetra fiarovana avo lenta toy ny pacifiers zazakely sy ny tavoahangy famahanana.
Tsy misy poizina sy tsy misy tsirony: Ny akora dia gazy karbonika sy rano, izay azo antoka sy azo antoka.
Ny mari-pana ambony sy ny fanoherana ny mari-pana ambany: Ny tahan'ny hafanana amin'ny akora manta silica gel dia -40 ℃ -220 ℃, izay mihoatra lavitra noho ny vokatra plastika sakafo, ary tsy miempo mihoatra ny 100 ℃.Ny fomba fampiasana dia azo antoka, na dia maina aza, dia ho levona ho lasa gazy silisiôma sy etona rano, izay tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza.
Fanoherana ny fahanterana ary tsy levona: Ny hafanan'ny oxidation decomposition dia ambony lavitra noho ny an'ny vokatra plastika mitovy.Tsy levona eo ambanin'ny mari-pana isan'andro ary manana fiainana fanompoana hatramin'ny 10 taona.
Mora diovina, mahatohitra menaka sy rano, ary azo diovina amin’ny fanasan-damba.Mora ampiasaina izy io ary mpanampy tsara ho an'ny vehivavy mpikarakara tokantrano.
Malemilemy, tsy mitongilana, mahatsapa tsara, toy ny hoditry ny zazakely, mafana sy mibanjina.Fifantenana ara-pitaovana, dingana fanodinana, fanaraha-maso kalitao: Ny fifantenana ara-nofo dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitry ny US FDA ho an'ny gel silica sakafo.